तपाईंको राशिफल : २०७८ माघ १ गते शनिवार – Sadhaiko Khabar
बिहिबार ०६ माघ २०७८
घट्यो पिसिआर परी’क्षणको शुल्क, यस्तो छ नयाँ शुल्क :
कलाकार नगएपछि महोत्सवका दर्शकले गरे स्टेज तो’डफोड, ज’लाए ४ वटा स्कार्पियो र मोटरसाइकल
भारतभन्दा नेपालमा नै पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो
आगामी २०७९ सालको पात्रो तयार, दशैको टिका असोज १९ गते
कस्तो फल हो एभोकार्डो ? कस्ता व्यक्तिका लागि उपयुक्त ?
तपाईंको राशिफल : २०७८ माघ १ गते शनिवार
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष ३०, २०७८ समय: १८:३५:५७
मेष : गु’मेको स्थान प्राप्त हुनुका साथै समाजमा आफ्नो व’र्चस्व बढ्नेछ। विशेष भेटघाटले काममा उत्साह बढाउला। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्र’भुत्व जमाउन सकिनेछ। आँ’टले कीर्तिमानी दिलाउनेछ। साथीभाइको सहयोग जुट्नेछ। अरूलाई प्र’भावित पारेर काम बनाउने समय छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। व्यापारमा निकै फाइदा हुनेछ।
वृष : जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि तत्काल लाभ न’हुन सक्छ। अवसरका लागि जो’खिमपूर्ण काममा जुट्नुपर्ला। कामको सन्दर्भमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्र’तिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ। मौका आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। बा’ध्यतामा अल’मलिनुपर्ला। परिश्रमको उचित मूल्य नपाइने स्थिति देखिन्छ। अरूको विश्वास गर्दा धो का हुन सक्छ।
मिथुन : सामान्य काममा धन र श्रम खर्च’नुपर्ला। सम’स्याप्रति ग’म्भीर नबन्दा दुः’ख पाइनेछ। कामको चा’प बढ्नेछ भने श’रीरमा कम’जोरी तथा आ’लस्य अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहार’विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। गो’पनीयता बाहिरिनाले समस्या पर्न सक्छ। आफ्नो वस्तुमा अरूले दा’बी गर्लान्। बि’ग्रिएको काम स’च्याउन दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
कर्कट : रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ। मन मिल्ने साथी भे’टिनुका साथै प्रेम र मित्रताको ब’न्धन क’सिन सक्छ। कामको चापबाट फुर्सद पाइनेछ। व्यवसायले मनग्गे आम्दानी दिलाउनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त होला। तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनेछ। परिवारजनको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ। अतिथिका रूपमा मानसम्मान समेत प्राप्त हुनेछ।
सिंह : श’त्रुहरू कि’नारा लाग्नेछन् भने प्रति’स्पर्धामा वि’जयी भइनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काममा मनग्गे फाइदा हुनेछ। रो’किएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। मिहिनेतले राम्रै प्रतिफल दिलाउनेछ। चु’नौती चि’र्दै काम बनाउन सकिनेछ। पहिले ई’र्ष्या गर्नेहरूले नै सहयोग गर्न थाल्नेछन्। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ।
कन्या : आफ्ना सूचना बाहि’रिनाले स’मस्या आउला। कामप्रति ग’म्भीर नबन्दा अवसर गु’म्न सक्छ। समयको तालमेल नमि’ल्दा आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले दा’बी गर्लान्। पे’टको ख’राबीले कम’जोर भइनेछ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला। उपल’ब्धिविहीन काममा समय बि’त्नेछ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। पहिलेका सहयोगीहरू पछि ह’ट्न सक्छन्।
तुला : समयमा स’जग नबन्दा शुभचिन्तकहरू टा’ढिन सक्छन्। परि’बन्धले अ’प्ठ्यारो स्थिति नि’म्त्याउन सक्छ। मिहिनेतको फल अरूलाई सु’म्पनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आफ्नाले समयमा सहयोग नग’र्दा अवसर फु’त्किएला। नजिकका साथीभाइसँग अस’मझदारी बढ्नेछ भने काम बि’ग्रने ड’रले सताइरहनेछ। बे’सुरमा दिएको वचनले समेत आफैंलाई अ’प्ठ्यारो पार्नेछ।
वृश्चिक : काममा मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रै अवसर जुट्नेछ। साथीभाइले राम्रै सहयोग जुटाउनेछन्। पछिसम्म लाभ हुने काम प्रा’रम्भ गर्ने समय छ। भौतिक साधन जुट्नाले दि’गो योजना प्रारम्भ होला। व्यापारमा पनि मनग्गे धनलाभ हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रति’ष्ठा पाइनेछ। रचनात्मक काममा जु’ट्ने समय छ। रो’किएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन्।
धनु : आत्मविश्वासको क’मीले काममा पछि परिनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बे’वास्ता गर्दा दु:’ख पाइनेछ। खर्च हुने ड’रले स’ताउन सक्छ। वा’दविवादबाट टाढा रहनुहोला। बल’जफ्ती गर्ने बानीले आफैंलाई अप्ठ्या’रोमा पार्न सक्छ। ई’र्ष्या गर्नेहरूबाट स’जग रहनुपर्ला। अर्थ अ’भावले पनि काममा बा’धा पुग्नेछ। आफ्ना सूचनासम्बन्धी गोप’नीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला।
मकर : सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। बि’छोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जम’घटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त होला। प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दा’म कमाउने बेला छ। नयाँ तथा रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। वि’गतका क’मीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने मौका छ।
कुम्भ : समयमा हो’स नपु’ग्नाले व्यवहारमा पछि परिएला। आफ्नाबाटै टा’ढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अवसरका लागि निकै दौ’डधुप गर्नुपर्ला। समय दिन नस’क्दा बन्न लागेको काम बि’ग्रन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। भैपरी आउने खर्चले चि’न्ता बढाउन सक्छ। तत्काल फाइदा लिँदा भवि’ष्यमा नो’क्सान हुने देखिन्छ। यात्राको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
मीन : आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा मनग्य लाभ हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। अध्ययनमा राम्रै प्रगति हुनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने समय छ। सञ्चित धनको उपयोगबाट विशेष फाइदा हुनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन होला। मिहिनेतले आम्दानी बढाउनेछ। दिन उत्साहवर्द्धक रहनेछ।
५८ पटक हेरिएको
हरेक बिहान गर्नुहोस् यी का’महरु : हुने छैन पैसाको क’मी
माघ ६ गते विहिवारको राशिफल :
राशिअनुसार तपाईंको क’मजोरी के हो ? के छ सुधार गर्नुपर्ने ?
माघ ५ गते बुधवारको राशिफल